Hagaajinta darajooyinkaaga Google Marka aad la socotid Twitter adigoo raacaya Talooyin Ciriiri ah
Twitter waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan marka ay timaado kobcinta bogga internetka ee internetka. Dad badan ayaa si fudud u adeegsanaya bogga warbaahinta bulshada si ay u fariisiyaan mana garanayaan muhiimada ay leedahay. Koontadaada Twitter waxay ka heli kartaa boggaaga badan ee taraafikada iyo aragtida tayada, markaa waa inaad ku xidhaa saaxiibbada iyo xirfadlayaasha ku habboon sida ugu dhaqsaha badan. Nik Chaykovskiy, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lala wadaago xiriiro badan oo xiriir ah oo ku saabsan xisaabtaada Twitter. Isla mar ahaantaana, waa inaad ku qortaa maqaalo dheeraad ah boggaaga oo aad bilawdo wada hadalka, ka jawaab su'aalaha iyo su'aalaha, kala hadal macaamiishaada wixii ku saabsan astaantaada, iyo inaad la xiriirto asxaabta bogga Twitter-ka si loo balaadhiyo shabakadaada.
Waa ammaan in la yiraahdo Twitter waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada marka ay timaado dhiirrigelinta shakiga. Wadahadalada joogtada ah ee warbaahinta bulshada waa qasab in mawduucan bulsheed uu ka shaqeeyo kaliya haddii aad u adeegsanayso bulsho ahaan iyo ma ahan arrimo shaqsi ahaaneed. Taa ka sareysa, Twitter wuxuu kaa caawin karaa kaliya haddii aad tweet iyo retweet ku saabsan calaamaddaada, kala hadal dadka kale, iyo raac dadka ay khuseyso.
Isticmaal qalabyada Twitter ee loogu talagalay dhiirigelinta nooca
Ma jiraan wax la isku halleyn karo oo aan la raacin, laakiin waxaad isticmaali kartaa Twitter-ka gacanta si aad ula qabsato dad badan. Qalabka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waad ku kalsoonaan kartaa Twtpoll iyo Paywithatweet. Kama gudbi karno xaqiiqda ah in dad badani ay isticmaalaan qalabkan iyo barnaamijyo isku mid ah si ay qiime ugu yeeshaan taageerayaashooda..Waxa kale oo aad kor u qaadi kartaa darajada Google adoo isticmaalaya qalabkan Twitter-ka ama wax la mid ah.
Isku xir dadka oo ku yaalla goobaha kale ee warbaahinta bulshada
Hab kale oo aad u hesho taageerayaal badan oo Twitter ah waa iyada oo lala xiriirayo dadka ku jira boggaga kale ee warbaahinta bulshada oo ku martiqaadaya inay kugu soo raacaan Twitter. I aamin, waa mid ka mid ah habka ugu fudud ee ugu haboon ee lala xiriiri karo dad badan. Waa inaad kala hadashaa waxyaabo kala duwan oo ku marti qaad inay kula wadaagaan fekerkooda ku saabsan LinkedIn, Foursquare, FriendFeed, Facebook iyo Quora. Sidii aad u hubin lahayd inaad heshid taageerayaal badan oo Twitter ah, waana hab sahlan oo dadka ku farxi karo oo kor loogu qaadi karo astaantaada internetka. Marka calaamaddaada si buuxda loo kobciyo, boggaagu wuxuu si toos ah u heli doonaa aragtiyo badan iyo rikoodhada sare ee Google.
Isku-aadka tartanka Tartanka
Waa in aad tartamaysaa tartankaaga si aad u hesho dadka ku lug leh. Tweet "si joogta ah u wada shaqee si aad u tiro badan si aad dad badan uga qayb qaadato. Waa dadaal SEO ah oo lagu hormarin karo kobcinta boggaaga labadaba warbaahinta bulshada iyo natiijooyinka raadinta . Waa inaadan dareemin inaadan shaki ku jirin inaad lacag ku bixiso. Sida iska cad, waa farsamo ganacsi waxaana laga yaabaa inuu u baahdo lacag, waqti iyo dadaal. Qaadashada xisaabta in natiijooyinka iyo natiijooyinka ay marwalba weyn yihiin, waa inaad bilowdid tartamada Twitter sida ugu macquulsan. Dhammaan tani waxay xaqiijineysaa in boggagaaga uu sii fiicnaado google iyo waxaad heli kartaa macaamiisha badan oo laga yaabo inay xiiseynayaan alaabtaada iyo adeegyadaada Source .